ချောမွတ်သောခြေထောက်များပါသော Cheeky Seat Coverage အမျိုးသမီး ၀ တ်အတွက်အ ၀ တ်အစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်
အမျိုးသမီးရေကူး ၀ တ်စုံ
အမျိုးသားရေကူး ၀ တ်စုံ
ကလေးရေကူး ၀ တ်စုံ
နွေရာသီ Sexy ကွေး Loving Ruching ရှေ့အဝါရောင် One Pi ...
ချောချောမွေ့မွေ့သောအမြင့်ခြေထောက် Cheeky ထိုင်ခုံလွှမ်းခြုံ One Piece ...
Sexy V လည်ပင်းရှေ့တွင်ပခုံးကြိုးတစ်ချပ်လုံး Lad ...
အပြည့်အဝစီထားသည့်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အ ၀ တ်အထည်ဒီဇိုင်းရေကူးဝတ်စုံ ...
UPF50 + အသက်ရှူနိုင်သောရေစိုခံနွေရာသီကလေးငယ်ရေချိုး ...
Two Pieces လူငယ်မိန်းကလေးရေကူးဝတ်စုံဝတ်နှစ်အရွယ်၊
နွေရာသီ 90-120cm Eco-Friendly ရှူရှိုက်နိုင်သော Reversible B ...
Smooth High Cut ခြေထောက်ပြတ်သောထိုင်ခုံဖုံးလွှမ်းထားသည့်အမျိုးသမီး ၀ တ်ရေချိုးကန်တစ်ခု
- အရောင်ရွေးချယ်မှု - အရောင်အသွေးနှင့်တိရစ္ဆာန်ပုံနှိပ်ခြင်း၊
- ချောချောမွေ့မွေ့သောထည်ပစ္စည်းသည် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး elastic ဖြစ်သည်။
–Care - လက်ဆေးခြင်းအကြံပြုသည်။
မြင့်မားသောဖြတ်ခြေထောက်, cheeky ထိုင်ခုံလွှမ်းခြုံအသေးစိတ်သင်ပိုမို sexy နှင့်ချစ်စရာကောင်းအောင်။
–Bhis Bikini တွင်ခွက်များရှိပြီးသင်အခြေအနေနှင့်အညီ၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု: ဒီ tankini ရေကူးဝတ်စုံနှစ်မျိုးဟာ ၈၂% polyester နဲ့ ၁၈% spandex တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ stretchy ထည်အလွန်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောဖြစ်ပါတယ်။
Sexy v လည်ပင်းရှေ့ဒီဇိုင်းနှင့် sexy criss နှင့်အတူပခုံးကြိုးများနောက်ကျောအသေးစိတ်ကျော, tankini ရေကူးဝတ်စုံထိပ်ကိုပိုမိုချစ်စရာကောင်းစေပါ။
bikini ၏အောက်ခြေတွင်ရှေ့နှင့်နောက်ချိတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကြိုးနှစ်ချောင်းရှိသည်，ပခုံးပေါ်တွင်နှစ်ဆကြိုးဖြည့်စွက်။ ၎င်းသည်သင့်အားလှပသောရှုခင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်သင့်အားကောင်းမွန်ပြီးချစ်စရာကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
ကမ်းခြေ၊ ရေကူးကန်၊ ရေပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့်အပူပိုင်းအားလပ်ရက်များအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်ရေကူးဝတ်စုံကိုဒီဗိုက်ကထိန်းချုပ်ထားသည် ရဲ့ tanning ရာသီလက်ခံကြပါစို့
ကျွန်ုပ်တို့ထံ၌ US အရွယ်အစား၊ S (US ၀.၂-၂)၊ M (ယူအက်စ် ၄-၆)၊ L (ယူအက်စ် ၈-၁၀)၊ XL (ယူအက်စ် ၁၂-၁၄)၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အတွက်အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ!
- ချိန်ညှိထားသော spaghetti ကြိုးများ၊ သင့်အတွက်ပိုကောင်းသောသိုင်းကြိုးကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
ချည်ထားသောထုံးရေကူးဝတ်စုံကိုဖြတ်ထုတ် ချည်ထားသောထုံးရေကူးဝတ်စုံကိုဖြတ်ထုတ် လည်စည်းထုံး Front Bikini သတ်မှတ်မည် လည်စည်းထုံး Front Bikini သတ်မှတ်မည် V-Wired Two Piece ရေကူးဝတ်စုံ V-Wired Two Piece ရေကူးဝတ်စုံ
စတိုင်လ် ဂါဝန်အရှည်တစ်ဆက်တည်း ဂါဝန်အရှည်တစ်ဆက်တည်း နှစ်ပိုင်း နှစ်ပိုင်း နှစ်ပိုင်း နှစ်ပိုင်း
လည်ပင်း V လည်ပင်း V လည်ပင်း V လည်ပင်း V လည်ပင်း V လည်ပင်း V လည်ပင်း
အသွင်အပြင် ရပ်သွားသည် ရပ်သွားသည် ထုံးကြိုး ထုံးကြိုး V- ဝါယာကြိုး V- ဝါယာကြိုး
1. OEM, ODM ဒီဇိုင်းသည်ရေကူး ၀ တ်စုံအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ သင်၏ဒီဇိုင်းကိုသင်၏တံဆိပ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ print ထုတ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုမှာယူနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မော်ဒယ်လ်ပုံကိုပို့နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အလုပ်နိုင်ပါတယ်။ NO MOQ ကန့်သတ်ထားသည်။ မဆိုအရေအတွက်ကြိုဆိုသည်။ စိတ်ကြိုက်ရေကူးဝတ်စုံလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်။
၂။ သင်တို့အတွက် screen printing နှင့် digital sublimation printing ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပေးပို့ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။
3. မည်သည့်အရောင်အဆင်ပြေသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ထည်ဆိုးဆေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည်များသောအားဖြင့် ၁၀၀ pcs.s. သို့သော်မည်သည့်ပမာဏကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။
၅။ ဈေးသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်ပြconcerningနာအများဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်စျေးနှုန်းကိုသိလိုပါကအောက်ပါအချက်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ အဝတ်အစားပုံစံ၊ အဝတ်အထည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း၊ ပုံစံ၊ အထည်အလိပ်၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုမှာယူလေလေသင်စျေးနည်းလေလေဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ Sexy V လည်ပင်းတွင်ပခုံးကြိုးတစ်ချောင်း Ladies Bikini အစုံ
နောက်တစ်ခု: နွေရာသီ Sexy Curve Luch Ruching ရှေ့အဝါရောင် One Piece အမျိုးသမီးရေကူး ၀ တ်စုံ
Eco-Friendly ပျော့ပျောင်းသောစိုထိုင်းဆ Spandex Seam ...
Breathable ပါ ၀ င်သော S-XL အမျိုးသမီးစီးနွေရာသီရေချိုးကန် ...
အဆင်ပြေလွယ်ကူသော Elastic Edging Eco Friendly လျင်မြန်စွာ D ...
လျင်မြန်သော - ခြောက်သွေ့။ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးအမြင့်ဆုံးသော Elastic ချောမွေ့သော Yog ...
အလယ်ခါးမှိုခံနိုင်သောအမျိုးသမီးများ Sexy Cott ...
အရွယ်အစားအဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့သော Sexy Snug Breat ...
Baishiqing အထည်ရက်လုပ်ခြင်း Co. , Ltd.